Date My Pet » Ny Fomba Hanatonana Ilay Vehivavy Online - Avy A Woman ny Perspective
Ny Fomba Hanatonana Ilay Vehivavy Online - Avy A Woman ny Perspective
Fony tsy mbola nanambady niainako ry tsara tarehiko anjara amin'ny aterineto mampiaraka, anisan'izany ny e-mail maro avy mety suitors-tserasera. Tena no mahazo mahita ny tsara, ny ratsy sy ny ratsy. Ary efa niresaka niaraka tamin'i maro ny ankizivavy namako momba ny zavatra niainany ny aterineto mampiaraka. Ity lahatsoratra ity dia mamintina izay miasa tsara ho e-mail voalohany ny vehivavy, ary inona no mahatonga ny ra mangatsiaka nihazakazaka sy ny tanana namely mamafa alohan'ny faran'ny ny andinin-tsoratra!
Aza ho namana - Ary toa hita sy ho gaga ianao hoe firy ny olona hanadino izany rehefa mandefa ny fanokafana e-mail. Tsy toy ny hoe tsy ampy ny lojika ampahany amin'ny atidoha ary maka ny te hahazo tsara ny raharaham-barotra (miresaka an-telefaonina / mampiaraka na firaisana ara-nofo). Indrisy anefa isika vehivavy dia tsy ho toy izany foana. Dia tiantsika ny hanoboka ny rantsan-tongony tao ka mahita zavatra tsapantsika momba anareo voalohany. Dia tiantsika ny ho romanced sy hiaina sariaka resaka sy ny saina avy aminao. Eritrereto ho toy ny 'namindro antsika', raha tianao. Misokatra foana amin'ny namana, fifampiresahana e-mail (Tsy ela loatra) ary tokoa dia ho be kokoa ny valin-.
No mpiaro io hazavana sy mahaliana - Misy mahay mandanjalanja eo mahaliana / saina grabbing sy eny amin'ny rindrina / eny-mametraka. Fantatro fa afaka ny ho tahaka ny tsindry rehefa miezaka manoratra tsara fanokafana e-mail. Ny torohevitra tsara indrindra azoko omena dia ny ho tena. Vakio ny fizarana etsy ambany ny fomba rehetra mba tsy mankaleo ary eto dia roa toro-hevitra ho anao mba hanampy anao eo anatrehan'Andriamanitra ho olona ho mahaliana ary aoka hahafantatra fa sarobidy mamaly ny. Namaky ny mombamomba tsara sy hevitra amin'ny zavatra hitanao any. Tantarao indray ny zavatra efa za-draharaha, raha azo atao ny mamorona fifandraisana. Compliments mandeha tsara izy nanome tsy overdone ary tena. Kely iray dia tsara ho fiderana ny voalohany e-mail. Azonao atao ihany koa ny miresaka momba ny zavatra izay efa nanjo anao amin'ny andro, zavatra izay mampiseho kely ny hoe iza ianao. Raha toa ianao ka tovolahy mampihomehy misalasala mampiasa fampihomehezana kely, fotsiny aza BE LOATRA. Hatsikana maina mora misconstrued amin'ny alalan'ny e-mail. Vehivavy mifandray amin'ny alalan'ny fihetseham-po sy nizara traikefa, ary raha afaka mamorona ny fifandraisana taminy ianao antsasaky ny lalana misy.
Mitandrina izany fohy - Marina fa te ho namana ianao sy hahafinaritra tsy tiantsika ny lahatsoratra. Ny pejy rehetra ny soratra dia azo inoana fa handefa antsika mba hatory raha mamaky azy io mihitsy, na izany aza dia mety ho riveting. Amin'ny tsara indrindra mety mamaky maimaika fotsiny izany ary dia hitsara, ary manontany tena raha toa ianao ka tena manahy be loatra rehefa manokatra ny e-mail ny rehetra mahita ny soratra pejy! Ny e-mail tokony ho azon'ny sy mora ho antsika ny mamaky, izay midika hoe fohy sy ny saina grabbing. Mandehana ny kalitao ny habetsahana. Vitsivitsy impactful fohy sy andinin-tsoratra ary ny fiderana dia misy fomba fahandro ho an'ny fahombiazana.
Aza mankaleo - OK hitako hoe mety ho sarotra ny hahafantatra ny zavatra tokony hoe, ka indro, Izaho efa nanome anareo roa haingana hamantatra izany. Mankaleo dia manoratra ny lisitry ny zavatra momba ny tenanao toy ny toetra, na ny fandefasana ny hafatra izay manontany azy fotsiny izy na dia ho an'ny tsy miresaka vaovao hafa. Raha tsy mahazo ny mihevitra fa ny toetra avy amin'ny e-mail dia tsy ho fantatrao raha te-hiresaka aminao. Ary toy izany ihany izy dia tsy misahirana mamaly. Tianao azy no vonona hanoratra indray. Aza manitsy fotsiny ny mombamomba, Hamaky izy fa raha liana izy.
Aza cheesy - Maro ny olona no overcompensate sy hanao ezaka be. Mety tahaka ny fampiasana ny compliments-sy / na vazivazy, ary foana eny amin'ny tsara indrindra ho cheesy, ary amin'ny ratsy indrindra ho mahakivy. Manorata ho azy toy ny hoe miresaka amin'ny namana vehivavy, izay hanakana anao tsy ofisialy loatra sy latsaka ao an-tsaina miezaka mafy hametraka ny hampiaiky volana azy. Ampiasao ny hatsikana sy ny compliments fa kely. Toy ny sira no mahatonga ny sakafo tsara dia tsara, rehefa ampiasaina ihany kely, Toy izany koa eto.
Aza lisitra ny zavatra takiana rehetra - Indraindray ny olona dia lisitra ny zavatra rehetra mitady amin'ny vehivavy voalohany e-mail. Ary indraindray dia tanisao ireo toetra izay tsy te (na dia ratsy - tsy hahazo aina!) Izany teny izany dia ho toy ny henjana sy hiverina vehivavy mangatsiaka. Dia azo antenaina ny mamaly raha manao izany.
Aza tain-drendrika intsony vehivavy hafa ho nahita an-tserasera - Mampalahelo fa izany dia fahita koa amin'ny andro fiarahana an-tserasera, ary nitodika ahy foana mangatsiaka. Tena mahazo aina ny vehivavy ny hihaino ny olona eny slagging vehivavy iray hafa izay mitondra ny datin '. Tao aoriana ny saintsika isika dia manontany tena raha toa ka mitovy lahatra tahaka ny azy ary mahatonga antsika hahatsapa amin'ny tenderhooks manontany tena raha toa ianao ka ho toy ny mitsara amintsika toy ny ianareo eto. Tsy toy ny areti-mandringana izany.
Aza miresaka firaisana ara-nofo eo amin'ny voalohany e-mail! - Azoko tsara fa rehefa mahita vehivavy tsara tarehy ny hevitrao ara-batana, ary tsy misy maharatsy izany. Vehivavy na izany aza isika dia tena mora ny ho nanatona fotsiny ny firaisana ara-nofo. Ho an'ny ankamaroan'ny vehivavy izay mampiasa mampiaraka an-tserasera toerana, izany dia tsy voalohany no misy antony, izahay dia miandrandra ny hoe mampiaraka sy / na ny fiainana mpiara-miasa. Fantatro dia izy no marina ho an'ny ankamaroan'ny olona izay toerana ny mampiaraka koa, ary indrisy fa misy maro ihany koa ny olona izay tao fotsiny satria maniry hatao nametraka. Ary ny radars dia tamin'ny fo tokoa miala ny mamantatra ireo olona ireo. Dia ahantòny azy haingana, ka tsy ho toy ny iray misy soratra hoe 'ireo olona ireo'. Tsy filazana zavatra ara-nofo eo amin'ny e-mail voalohany. Fantatro fa misy torohevitra avy tao amin'ny lehilahy 'haka ny mpanakanto', izay miresaka momba ny fanorenana sy ny firaisana ara-nofo gidragidra ny olana, ary izany no tsara rehetra sy ny tsara, Raha ny hevitro anefa no tsy mety izany ny aterineto mampiaraka. Raha kely indrindra dia izany ihany no miasa raha atao fomba iray. Fun ny filalaovana fitia no tsara, nefa tsy manao izany koa ny sehatra raha tonga ara-nofo loatra manerana voalohany amin'ny fifandraisana. Ho antsika vehivavy dia crass. Dia mahatsapa toy ny hitsin-ary mino isika dia iray amin'ireo vahoaka ianao miezaka amin'ny fomba ity. Tsarovy, dia te-hahatsapa manokana. Miasa eo amin'ny fifandraisana aloha, avy eo dia nisy fanahy ny filalaovana fitia.
Zava-dehibe indrindra ny sainao hahazo mananatra - Mety ho any an-danitra izy, ary hahatsiaro izy no vehivavy iray monja avy amin'ny maro. Raha toa misy olana mifandray amin'ny vehivavy ary mahazo valin-tserasera ny hafatra, hijery an-tsainao teo aloha. Ny fahasalamanao mamoy fo? No ataovy ny fanantenana rehetra ho iray ny e-mail rehefa mandefa izany? Raha izany dia ho avy izao manerana ao amin'ny e-mail ary hametraka ny vehivavy eny. Asa ny anao hatoky sy ny saina teo mba fantatrao misy safidy maro ho anao. Ny daty ho avy ny vokatry ny misy 1 e-mail dia tsy zava-dehibe. Izany dia ianareo afaka mandefa fahafinaretana, manao sy mazava fo hafatra izay hahazo valiny tsara.
3 Zava-miafina ny mampiaraka amin'ny Budget Mpianatra
Nandeha fiara miaraka amin'ny biby
Lazao Tsy nampitony Dates Voalohany
Inona no fitiavana Afaka hiaro anao amin'ny fahoriana?